Home CLASSIC STARS Andrea Pirlo Tantara Mitantara Momba ny Tantaram-pahagagana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny legiona baolina kitra malaza amin'ny anarana; "The Architect". Ny tantaran'i Andrea Pirlo tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony avokoa ny rehetra saingy tsy dia misy firy ny mahita an'i Andrea Pirlo Biography izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Andre Pirlo dia teraka tamin'ny andron'ny 19T of May, 1979 tao Flero, Italia avy amin'ny renin'i Livia Gatta sy ny rainy, Luigi Pirlo.
Pirlo dia iray amin'ireo ankizy roa miaraka amin'i Ivan sy ny rahavaviny, Silvia Pirlo.
Pirlo dia mpilalao baolina kitra toy ny zaza. Nirotsaka an-tsehatra izy, dia niara-nilalao tamin'ny rahalahiny sy ny namany izy teo amin'ny fasika tao an-dranomasina Viareggio tao Toscany, izay nandehanan'ny fianakaviany hanaovana fialantsasatra.
Ankoatra ny fialantsasatra, nandany ny sisa tamin'ny fahazazany tany amin'ny faritanin'i Brescia izy. Izany no nahitan'ny talentan'ny baolina kitra.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Karohy amin'ny famintinana
Nanomboka ny asany tamin'ny klioba i Pirlo tamin'ny naha-mpilalao baolina an-tsehatra midadasika niaraka tamin'i Brescia, tanàna niaviany. Nanintona ny sain'ny besinimaro voalohany izy tao amin'ny 13, fony izy sy ny ekipany, 'Voluntas Brescia U15', nandray anjara tamin'ny 1992 'Dana Cup'.
Nanao izany tamin'ny semi-finals izy ireo talohan'ny nandondona. Ity ambany ity dia sangodim-panambadiana nataony voalohany.
Ireto ambany ireto dia tanora Pirlo tena nanangona ny fanontam-bokiny voalohany ho an'ny ekipa tanora Brescia.
H nandroso ny laharana izay nahazo azy toerana ambony tao amin'ny ekipa. Nanampy ny ekipany i Pirlo mba handresy ny lohatenin'ny Serie B ary hahazoana ny fampiroboroboana Serie A ao 1997. Amin'ny maha-tovolahy kely azy, ny fampiofanana tsy misy fiafarana dia ny filahatry ny andro.
Ny mpanazatra azy Francoonce niteny indray mandeha..."Rehefa tapitra ny fiofanana, dia tsy maintsy nanapaka ny fahefana aho mba hamerenana an'i Andrea hody, na efa nianatra nandritra ny alina manontolo! "
Nanome ny vokatra tsara indrindra sy hitany i Pirlo. Ny fampisehoana nampanantenainy dia nitarika ho amin'ny Internazionale tao 1998.
Pirlo raha tao Inter no niezaka ny hilalao fotoana ao amin'ny club club vaovao, noho ny tsy fahampian-dry zareo, ary koa fifaninanana mavesatra amin'ny mpilalao hafa ao amin'ny toerany. Nalefa nividy azy tao amin'ny 1999 izy avy eo.
Na dia teo aza ny fofona nahatsiravina niaraka tamin'i Reggina, sy Brescia indray, i Pirlo dia mbola tsy afaka nanapaka ny lalao fanombohana an'i Inter, ary namidy tamin'ny mpifanandrina Milan tamin'ny 2001.
Tany Milan, nanapa-kevitra ny hanendry an'i Carlo Ancelotti handamina an'i Pirlo eo anoloan'ny fiarovana ho mpilalao baolina lavalava, izay nahafahan'izy ireo fotoana bebe kokoa teo amin'ny baolina mba handrafetana ny fanafihan'ny ekipany.
Pirlo dia nandresy tamin'ny asany vaovao, ary vetivety dia lasa mpilalao baolina matihan'izao tontolo izao, nilalao anjara lehibe tao amin'ny fahombiazan'i Milan.
Tao 2011, niala tao Milan izy rehefa avy nifamaly tamin'ny klioba. Niaraka tamin'i Juventus izy noho ny famindrana maimaim-poana.
Talohan'ny nahatongavan'i Pirlo tany Juventus, ny ekipa dia nanjary tsy tratra hatramin'ny 2003. Izy no nitondra lohateny efatra (2012, 2013, 2014, sy 2015), roa ny anaran'ny Supercoppa Italiana (2012 sy 2013), ary Coppa Italia (2015) mankany amin'ny club. Nifanome anjara tamin'ny lalao 164 ho azy ireo izy ary nanao ny tanjona 19.
Tao amin'ny 2015, nanao sonia izy 'New York City FC', ekipa iray izay ampahany 'Major League Soccer'. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Andrea Pirlo dia avy amin'ny fianakaviana iray manan-karena. Ny rain'i Pirlo dia nanangana orinasa mpivarotra varotra Brescia tao amin'ny 1982 antsoina hoe Elg Steel. Pirlo tenany dia mitazona tsatòka ao amin'ny orinasam-pianakaviana. Ity ambany ity ny sarin'ny zanany sy ny dadany Luigi Pirlo.
Andrea Pirlo dia manolotra an'i Daddy Luigi Pirlo
Raha ny momba ny hareny avy amin'ny asa aman-draharahany ny fiainam-pianakaviana sy ny baolina kitra dia nilaza i Pirlo tamin'ny resadresaka tamin'ny teny Italiana Vanity Fair gazety tsy miresaka momba ny vola.
Ny fahanginan'ny media manontolo dia misy ny fianakavian'i Andrea Pirlo sisa. Anisan'izany ny Reniny, Livia Gatta, Rahalahy (Ivan Pirlo) sy ny rahavavy (Silvia Pirlo).
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Tamin'ny taona 1999, Andrea Pirlo dia nanjary tia an'i Deborah Roversi nandritra ny fotoana nahitany an'i Inter Milan.
Andrea Pirlo sy Deborah Roversi- Tany am-boalohany
Fotoana niaretany ny fotoan-tsarotra indrindra teo amin'ny asa fitoriana nataony. Indray mandeha dia naverina nindramina tamin'i Reggina sy Brescia izy. Mba hahafahana mifantoka bebe kokoa amin'ny fiainany manokana, dia nanapa-kevitra ny Pirlo sy Deborah fa hanambady an'i 2001 any amin'ny tanànan'i Flero any Brescia.
Andrea Pirlo sy Deborah Roversi ny fampakaram-bady sary
Nihatsara ny fiainan'i Pirlo taorian'ny fanambadiany. Roa taona taorian'ny lanonana nataony, samy nanana ny zanany voalohany izy ireo. Zanakalahy iray nantsoina hoe Niccolò (teraka 2003). Telo taona taty aoriana dia nanana zanakavavy iray antsoina hoe Angela (teraka 2006) izy ireo.
Nijanona nandritra ny taona maro i Pirlo sy i Deborah. Tsy dia faly loatra i Pirlo. Izy no nampiasaina mba hihazonana ny tony.
Vetivety dia nalahelo ny fifandraisan'izy ireo satria samy nieritreritra ny tenany izy ireo na dia teo imasom-bahoaka aza.
Nandritra ny 2014, dia nisara-panambadiana i Pirlo sy Roversi taorian'ny telo ambin'ny folo taona taorian'ny fanambadiana an'i Pirlo niaraka tamin'i Valentina Baldini, vehivavy iray nihaona tamin'ny klioban'ny gulf izy.
Ny zanany roa (Niccolò sy i Angela) dia nianatra nitia sy nanaiky an'i Valentina ho toy ny reny. Ity ambany ity ny sarin'ireo izay manana fotoana mahafinaritra any Miami, Etazonia.
Nankalaza ny fandresena ihany koa izy ireo.
Ny ankizivavy Andrea Pirlo, dia niteraka kambana i Valentina tamin'ny 10th of July, 2017. Nanambara izany tao amin'ny bilaoginy izy. Ny kambana dia antsoina hoe Leonardo sy Tommaso.
Andrea Pirlo Twins- Leonardo sy Tommaso
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Wine Business
Pirlo dia fantatra amin'ny maha-mpamangy divay azy. Tahaka izany Andres Iniesta, Pirlo dia zazalahy lehibe ao amin'ny orinasa divay.
Pirlo dia manana tanimboly divay lehibe any Italia, izay mamokatra tavoahangy 15-20,000 isan-taona. Pirlo dia afaka misotro foana amin'ny tanimboalobony mandritra ny andro.
Andrea Pirlo dia misy divay misy tavoahangy ao amin'ny tanimboalobony
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Alahelo ratsy indrindra teo amin'ny fiainany
Niaiky i Pirlo tao amin'ny autobiography 'Heveriko fa milalao', noheveriny fa nandinika izany rehetra izany taorian'ilay fiverenan'i Liverpool mahavariana nanohitra an'i Milan tao amin'ny Ligy 2005 Champions League.
Amin'ny teniny ...'Nieritreritra ny hiala aho satria, aorian'i Istanbul, tsy nisy dikany intsony. Ny farany ny 2005 Champions League dia nanemotra ahy. Nandinika ny fiafaran'ilay andalana aho: vita ny dia. Vita ny tantara ary toy izany koa aho. '
Andro farany mampalahelo indrindra amin'ny fiainan'i Andrea Pirlo
Tao anatin'ny 13 volana, izy no mpandresy World Cup. Tao anatin'ny roa taona i Pirlo dia nanameloka ilay faharesena raha namely an'i Liverpool tany Atena i Milan.
Ny fandresena an'i Liverpool no nandresy ny Ligin'ny Champions League faharoa, ny fahatongavany voalohany tamin'ny Juventus tao 2003. Hmmmm ......Mety ho fatiantoka raha toa marina i Pirlo tamin'ny teniny.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -saoka
Ankehitriny, saika tsy azo toherina, ny bearded beauty dia nanambara fa farany izy no manantona ny kirarony. Ny divay dia afangarony amin'ny volombava amin'ny volombavany.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -A Media Brand
Tsy isalasalana, Pirlo indray mandeha izao no mpilalao baolina kanto indrindra any Eoropa. Indray mandeha izy no nanasongadina ny tifitra lamaody amin'ny GQ izay mampiasa famaky.
Ity ambany ity ny porofo amin'ny lahatsoratr'i Barlo amin'ny tsena.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -anaram-bosotra
Ireo mpilalao namany ao amin'ny ekipa nasionaly Italiana dia nanonona anarana hoe Pirlo "Ilay mpahay siansa" noho ny fomba nanamboarany horonantsary, ary nanamboatra fahafaha-manao teboka lava tamin'ny fotoana lava, nanakenda ny làlana. Namindra ny anaram-bositra izy "Metronome" Nandritra ny lalao tao Milan, noho ny fomba nanamafisany ny lalao tamin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fotoana nilalaovan'ny ekipany tamin'ny alàlan'ny lalao mivantana sy mahomby teo amin'ny faritra afovoany, ary koa ny fahafahany manolotra ny tenany ho an'ny mpiara-miasa handray sy mizara ny baolina.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ireo mpankasitraka an'i Juventus ihany koa dia nanonona azy "Mpampianatra", "Maestro ", ary "Mozart ". Heverin'izy ireo ho isan'ny iray amin'ireo mpanatrika lehibe indrindra amin'ity toerana ity, noho ny fahitany, ny fanaraha-mason'ny baolina, ny famoronana ary ny fahaizana mandalo.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Iray amin'ireo olon-tiana indrindra
Betsaka ireo mpilalao baolina kitra. Avy eo, ambonin'izany dia misy ireo tarika mpihira manana firaiketam-po izay nandidy ny haja sy ny fankasitrahana.
Amin'izao andro sy ankehitriny izao, dia tafiditra ao izy ireo Lionel Messi, Ronaldo taloha, new Ronaldo, Xavi, Andres Iniesta, Zinedine Zidane - ary mazava ho azy, Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Almost joined Chelsea
Pirlo dia nanatevin-daharana ny Anglisy Giants Chelsea tany amin'ny 2009 nanantena ny hiasa teo amin'ny mpanazatra teo aloha Carlo Ancelotti. Na izany aza, niditra an-tsehatra ny filohan'i AC Milan ary nijanona niaraka tamin'ny Club Italiana nandritra ny fizaran-taona roa.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -A Gamer
Pirlo amin'ny fiteny iray dia mino fa ny PlayStation no fitaovana tsara indrindra faharoa taorian'ny kodiarana.
Nolazainy fa nandany ny tolakandron'ny fialan-tsasatra 2006 WC nilalao tao amin'ny PlayStation. Matetika izy no milalao miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy italianina mandritra ny ora maro.
Andrea Pirlo Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Admiration ho an'ny Scholes
Paul Scholes no hany fitaovam-peo anglisy anglisy Pirlo no lehibe indrindra amin'ny tantara Anglisy.
Araka an'i Andrea Pirlo, "I Paul Scholes no mpilalao baolina kitra malaza eto amin'ny serasera. Nanam-pahaizana taminy izy. Ny hafa dia mpandidy "
Ity famaritana ity dia nataon'ilay legioma italiana nahita ny sary etsy ambany.
Ny antontan'isa etsy ambony dia angamba, 'sakafo ho an'ny fieritreretana' ho an'ny mpankasitraka baolina kitra sy mpankafy Manchester United.
Hanolotra porofo mivaingana ho an'ireo izay te hampitaha ireo mpilalao miditra telo lehibe. Frank Lampard dia anisan'izany tranga izany.
Ny tantaram-pitiavan'i Mauro Icardi momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Aprily 24, 2018